तपाइँको कथामा रूपकहरू थप्ने तरिका यहाँ बिक्री हुनेछ Martech Zone
तपाईंको कथामा रूपकहरू थप्ने तरिका यहाँ बिक्री हुन्छ
सोमबार, अप्रिल 6, 2015 मङ्गलबार, अप्रिल 7, 2015 Douglas Karr
हाम्रो सेवाहरू बेच्दा, हाम्रो प्रक्रियाको व्याख्या गर्दा, र हाम्रा सम्भावनाहरूसँग अपेक्षाहरू सेट गर्ने क्रममा हामीले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सामान्य रूपक लगानी गर्दै। अधिक र अधिक, हामी ग्राहकहरु को लागी सुन्छौं जसले भन्छ:
हामीले [मार्केटिंग रणनीति घुसाउनुहोस्] प्रयास गरेका थियौं र यसले काम गरेन।
तपाईंले कति समय यो प्रयास गर्नुभयो? तपाइँ कति राम्रा कार्यान्वयन गर्नुभयो? तपाईले कुन आकारको लगानी गर्नुभयो? तपाईंको रिटायरमेन्ट कोषको चर्चा गरौं ... यदि तपाईंले एक महिनाको लागि प्रयास गर्नुभयो भने, वित्तीय परामर्शदातासँग भेट्नुभएन, र केही सय पैसा लगानी गर्नुभयो, तपाईंलाई कत्तिको राम्रो लाग्छ तपाईं रिटायर हुनुहुन्छ?
रूपकले राम्रोसँग काम गर्दछ किनकि पेशेवरहरूले लगानीहरू कसरी काम गर्दछन् भनेर पहिले नै बुझ्दछन् - चाहे यो स्टकमा लगानी गरिरहेका छन् वा केही फन्डहरूलाई aside०१ केमा राखेर। यसले लामो अवधिको अपेक्षण पनि सेट गर्दछ जुन हामी उचाइ र निन्द्रामा उत्साहित वा निराश हुनुपर्दैन तर त्यसको सट्टा दीर्घकालीन ट्रेन्डि onमा केन्द्रित हुन्छ। रूपकहरूको काम!
के कविहरु को काल्पनिक कला के थियो अब प्रभाव, बेचन, वा अरूलाई मनाउन को लागी जो को लागी एक आवश्यक संचार कौशल हो।
यो एनी मिलर बाट इन्फोग्राफिक, एक प्रस्तुतीकरण र स्पिच कोच, तपाईंलाई लाभ, रणनीतिहरू र उत्कृष्ट रूपक बिक्रीको उदाहरणका सबै मार्फत हिंड्दछ।
टैग: रूपकवर्णकहरूबिक्री सक्षमताबिक्रीशब्दहरु
कसरी डिजिटल सम्पत्ति प्रबंधन सामग्री प्रबंधन प्रभाव
Re कारण तपाईको सामग्री मिलेनियलमा प्रतिध्वस्त हुन असफल भयो